अचानक पुरुष जोडी रुँदै मिडियामा आए, कसले यस्तो गर्यो त यो मायालु जोडीलाई ? (भिडियोमै हेर्नुस् ) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > अचानक पुरुष जोडी रुँदै मिडियामा आए, कसले यस्तो गर्यो त यो मायालु जोडीलाई ? (भिडियोमै हेर्नुस् )
अचानक पुरुष जोडी रुँदै मिडियामा आए, कसले यस्तो गर्यो त यो मायालु जोडीलाई ? (भिडियोमै हेर्नुस् )
admin November 8, 2019 भिडियो	0
झापा । केटा केटा बिच नेपालमा बिबाह भएका अन्य जोडीहरु तपाइँहरुले देखु भएको छ । काठमाडौ घर भएका अनुभव दर्जी र झापाका रुपक गिरिबिच गहिरो प्रेम भएपछी अन्ततः उनिहरुले बिहे गर्ने निधो गरे ।
परिवारलाई सोधे परिवारबाट हुदैन भन्ने निर्णय भएपछी उनिहरु एक अर्काबिना बाच्न नसक्ने भए अनि भागेर बिबाह गरे । झापाका रुपकको घर परिवारबाट स्वीकार गरेपछी बुहारी बनेर बसेका अनुभवको माइतीबाट अहिलेसम्म बोलाएका छैनन ।
उनिहरुको प्रेमले धेरै नै दु:ख अनि सास्ती भोग्नुपर्यो । बिबाह गरेका उनिहरु बस्नलाई कोठा आवस्यक पर्यो तर कोठा पुग्दा घरबेटिले उनिहरु समलिङ्गी हुन र बिबाह पनि गरेको कुरा थाहा पाएर कोठाभित्र पस्न दिएनन ।
कोहि बच्चाहरु आए भने उनीहरुको अभिभावकहरुले त्यहाँ आउन दिदैनन छक्का हिजडा भन्दा मन दुख्ने बताउने उनिहरु बिच यौन सम्पर्क पनि हुने रहेछ । उनिहरुले आफ्ना सबै भित्री कुरा यसरी खुलाए र धुरु धुरु रुँदै मनका कुरा दुखि हुँदै सुनाएका छन् तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।
देश बेच्ने नेतालाई जुत्ताको माला लाउनुपर्छ भन्दै इन्द्रेणीका कृष्ण कडेंल गर्जिए ! स्टेजमै मन्त्रीलाई चेतावनी दिए (भिडियो हेर्नुस)
भर्खरै श’क्तिशा’ली भू’कम्पको ध’क्का, ५ जनाको मृ’त्यु ३०० जनाभन्दा बढी घा’इते
बलिउडका भिलेन गुलसन ग्रोभर नेपालमा यसरी गुणगान गाए नेपाल र नेपालीको … भिडियोमै हेर्नुस्
पोखरा स्कुल भित्रै घट्यो यस्तो घटना, टोइलेट लगेर यस्तो सम्म गरे – भिडियो सहित हेर्नुहोस
जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर पूर्व एमालेलाई प्रचण्डकाे यस्तो प्रश्न! – भिडियोसहित